धुर्मुस-सुन्तलीले मनाउदै छन् १२ औं वैवाहिक बर्ष गाठ, धुर्मुसले लेखे यस्ताे मन छुने स्टाटस ! – Dainik Sangalo
धुर्मुस-सुन्तलीले मनाउदै छन् १२ औं वैवाहिक बर्ष गाठ, धुर्मुसले लेखे यस्ताे मन छुने स्टाटस !
November 29, 2020 333
२०६५ साल मंसिर १४ गते हिजो जस्तो लाग्छ ! त्यो दिन बाट सुरु भएको हाम्रो यात्रामा समय बितेको पतै भएन ! तिमी जीवन म यस्तो उपहार बनेर आएउ एक्लो जिबनले बेग्लै सार्थकता पायो ! तिमी सङग बिताएका प्रतेक पल हरुले मिठा अनि बेग्लै आनन्दका अनुभुति हरु गरिरहन्छ! तिमी साच्चिकै आड , भरोसा ,उर्जा अनि साहसको भण्डार हौ, म मात्रै होइन हाम्रो परिवारको अभिभावक हौ!
तिम्रो शब्द कोश मा तोडने होइन जोडने अनि माया र प्रेमले जगत हसाउने दरिलो इच्छासक्ती छ, त्यसैले तिमी महान छौ! तिम्रो सकारात्मक सोच अनि मन सग मैले मन साट्न पाएको छु! त्यही मन संग मन जोडदै बढेको हाम्रो यात्रा सबैको मन जोडदै अघि बढिरहेको छ नि!
तिमीले कल्पना गरेका हरेक परियोजनाले तेहि भएर सार्थकता पाउदै अघि बढेका छन्नी ! आफू होइन जगत हसाउने तिम्रो यात्राको म सारथि बन्न पाएकोमा मैले निकै भाग्यमानी ठानेको छु वैवाहिक बर्सगाठको अवसरमा मन अनि मुटु भरी को शुभकामना कुन्जु!! सिताराम कट्टेलको स्टाट्स जस्ताको तस्तै !
Prevखुसीको खबर ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट सेना फिर्ता गर्न भारत तयार’
Nextनेपाली बजारमा हिरोका १९ मोडलका बाइक र स्कुटर: सबैभन्दा महंगो एक्सपल्स-२००, मूल्य सूची यस प्रकार छ ।
बुहारी सिर्जना त्रिपाठीलाई प्रचण्ड निवासमा प्रवेशनै निषेध भनेपछि दीईन मुखभरिको जवाफ
म बाच्न चाहान्छु मलाई बचाइदिनुस् ,मुटु थामेर हे’र्नुहोला कठै बिचरा !
हङकङमा नेपालीले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टमा आगलागी, ७ को मृत्यु